Qarax miino oo saakay ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho – Somali Top News
Qarax miino oo saakay ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho
Waxaa abaaro saakay 7:30 daqiiqo qarax miino oo laamiga dhinaciisa la dhigay uu ka dhacay laamiga Warshadaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dhabarka Dambe ee xerada Damaanyo.
Goobjoogayaal ayaa noo sheegay in qaraxa miino lala eegtay gaari nuuca Soomaalidu u taqaan Hilux ama qooqan oo xiligaasi laamiga marayay, waxaana la sheegay in gaarigaasi uu si dirqi ah uga bad baaday qaraxa.
Inta la xaqiijiyay qaraxa Miino ee saakay ka dhacay Laamiga Warshadaha gaar ahaan dhabarka Dambe ee Xerada Damaanyo ee degmada Hodan ayaa waxaa ku dhaawacmay labo nin oo la socday Mooto Bajaaj kuwaa oo isbitaal loola cararay.
Wali lama oga cida lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo qaraxan miino ee saakay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay soo gaaray ciidamo booliis ah oo halkaasi baaritaano ka sameeyay.
← Ciidamada dowladda ee dagmada Awdiinle oo dagaal ku dilay askar Shabaab ah
Ciidamada Booliska oo gacanta ku dhigay hub farabada iyo lacag →
Axmad Madoobe oo sheegay halka hadaf ee Shabaab dadka u dilaan
M/weyne Farmaajo “ In dowladda lagu dacweeyo Beesha Caalamka waa dowlad dumin”
April 21, 2019 Somali Top News 0
Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay inuu Soomaaliya kala baxayo ciidamadiisa